Columbus, OH | Waaxda sheybaarka | Caafimaadka PW
Maxay qabataa Waaxda Shaybaarka?
Waaxda sheybaarka ee PWHealth waxay maamushaa dhammaan baaritaanka pap, mammography, shaqada dhiigga, dhaqamada, iyo waxyaabaha kale ee sheybaarka loo diro. Qof ka socda waaxda shaybaarka ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha 8:00 am - 4:30 pm si uu uga jawaabo su'aalahaaga.
Sidee loo maareeyaa biilasha shaqada sheybaarka?
Waxaan leenahay qandaraas gaar ah Quest Diagnostics dhammaan sheybaarka howshiisa. Fadlan ku xaqiiji caymiskaaga in Quest Diagnostics uu ku jiro shabakaddaada.
Goorma ayaan helayaa natiijooyinka shaybaarka oo ay ku jiraan natiijada baaritaanka baaritaanka iyo raajada naasaha?
Si aad u hesho natiijooyinkaaga fadlan gal koontadaada 'mychart'. Haddii aadan diyaarin shaxankaaga fadlan wac xafiiska si laguugu soo diro martiqaad emayl. Dhammaan natiijooyinka sheybaarkaaga waxaa laga heli karaa koontadaada 'mychart'. Fadlan la soco natiijooyinka qaar si otomaatig ah ayaa loo sii daayaa. Fadlan u oggolow bixiyeyaasha ugu yaraan 48 saacadood inay ku cusboonaysiiyaan natiijooyinkaaga iyaga oo wata warqad natiijo ah.
Ka waran shaqadayda dhiigga dhalmada?
Shaqada koowaad ee dhiigga OB:
Shaqada dhiigga ee lagu qabtay booqashadaada hore waxay qaadataa laba maalmood si aan u helno natiijooyinka. Dhammaan natiijooyinka caadiga ah ayaa lagu siin doonaa booqashada xigta. Kalkaaliye caafimaad ayaa kuugu soo wici doona wixii natiijo aan caadi ahayn.
AFP (Alfa Uurjiifka Uurka):
Natiijooyinkani waxay qaataan 5-7 maalmood si aan u helno. Xafiiskayagu wuxuu kula soo xidhiidhi doonaa natiijooyin caadi ah oo aan caadi ahayn.
Glucose iyo Hemoglobin:
Natiijooyinka baaritaanka waxaa lagu heli doonaa 2-4 maalmood oo shaqo gudahood. Natiijooyinkaaga waxaa lagu dhejin doonaa barnaamijkaaga 'MyChart'. Fadlan wac oo la hadal kalkaalisada haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid natiijooyinkaan.
Natiijooyinkani waxay qaadan karaan ilaa 14 maalmood oo shaqo si loo helo. Waxaa lagugu wargalin doonaa natiijooyinka Caadi ah iyo kuwa aan caadiga ahaynba isla marka bixiyahaagu dib u eego.
Kooxda B Beta Strep:
Imtixaanadani waxay qaadanayaan laba maalmood si natiijooyinka loo siiyo xafiiskayaga. Waxaa lagugu soo ogeysiin doonaa ballantaada xigta ee natiijooyinka caadiga iyo kuwa aan caadiga ahayn.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan si xor ah ula xiriir xafiiskayaga.